Semalt: Ahoana ny fanakanana ny fitohanana anatiny amin'ny Google Analytics
Miaraka amin'ny fandikana ny votoatin'ny Google Analytic User, ny mpampiasa dia afaka mampiasa fomba amam-panao manokana hanakanana ny fifamoivoizana anatiny amin'ny tranokala iray. Alexander Peresunko, Mpanantanteraka Success Manager ao amin'ny Semalt , dia manasongadina ny fomba ahafahan'ny mpampiasa hampihatra mivantana ny teknika ao amin'ny tranokalany.
Misy fomba maro hanafoanana ny fifamoivoizana anatiny mankany amin'ny tranonkala iray avy amin'ny GA (Google Analytics). Amin'ny voalohany, mety ho sahiran-tsaina ny mpampiasa sady mamaritra ny maha-zava-dehibe ny fanalàna ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala manokana. Amin'izany, ireo tompon-tranonkala dia tokony hanamarika fa ny fifamoivoizana anatiny (fifamoivoizana amin'ny mpampiasa tranonkala sy mpiara-miasa ao amin'ny tranokala) dia afaka manatsara ny fomba fijerin'ny mpizahatany sy ny tarehin'ny mpizahatany, noho izany dia mametraka ny angon-drakitra diso na diso.
Ny mpahay siansa Semalt dia mino fa mazava izany, ary noho izany dia atolotra ny mpampiasa ny manavaka ny fifamoivoizana ao anatin'ny fikambanana avy amin'ny an'ny mpihaino. Misy fomba maromaro hanatontosana io dingana manan-danja io, arakaraka ny fananganana fotodrafitrasa iray eo amin'ny adiresy IP sy adiresy. Ohatra, ny mpampiasa dia afaka manasaraka ny fifamoivoizana anatiny amin'ny alalan'ny fari-peo, domains, IP na ISP. Ny fizotran'ny fifamoivoizana dia azo tsinjaraina amin'ny fampiasana ny votoatin'ny mpampiasa, ny ISP sy ny variables amin'ny endriny. Ankoatra izany, ny fizarana segondra sy ny filters dia afaka manasaraka ny fifamoivoizana anatiny amin'ny mpijery na ny fifamoivoizana.
Manomboka amin'ny alàlan'ny fananganana tranonkala iray izay afaka mametraka cookies amin'ny solosaina rehetra sy ny navigateur rehetra izay azon'ny mpiasan'ny fikambanana ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny tranonkala. Ity cookie ity dia napetraky ny habaka custom izay napetraka ao amin'ny tranonkala iray..Ny dingana antsipirihany dia asongadina etsy ambany:
1. Manangana pejy web vaovao izay tsy misy votoatiny na karazana votoaty afa-tsy izay azo afenina ho toy ny pejy Internet na tranokala iray. Ny tompona tranonkala iray dia afaka mampiasa ny teknolojia set_CustomVar vaovao fa tsy ny fomba fiasa mahazatra setVar.
2. Ao amin'ny Google Analytics Profile, araho ny Segment Advanced ary tsindrio ny "Segment New".
3. Lazao ny ampahany mahazatra ho "fampidiram-bahoaka" ary ampidiro ity lojika ity. "Include-> Custom Variable (Value 01) -> Containing -> Eny." Ny mpampiasa kosa dia tokony ho azo antoka fa ny safidy manokana amin'ny Google Analytics (GA) dia tsy overshits (amin'ny toe-javatra izay ahafahana miovaova indraim-bava amin'ny sehatra iray ihany) ary mifanitsy amin'ny sehatra
4. Mamoròna sehatra iray hafa ary iantsoana azy hoe "Fikirakirana ny fifamoivoizana anatiny" ary ampidiro ity lojika ity; "Exclude -> Custom Variable (Value 01) -> Containing -> Eny." Vonjeo ity segondra ity ary avereno antoka indray fa ny saha misy ny code dia misy voalohany
5. Avelao ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipa anatiny hampifandray amin'ny pejin'ny tranonkala noforonina tamin'ny dingana voalohany ho an'ny fametrahana ny cookies amin'ny browsers.
6. Fantaro ny valiny. Izany dia mitaky andro maromaro mba hahafahana mampiseho ny angon-drakitra voatokana Source .